साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् : चैत्र ०८ गते आईतबारदेखी चैत्र १४ गते शनिबारसम्मको…. – SUDUR MEDIA
March 23, 2021 AdminLeaveaComment on साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् : चैत्र ०८ गते आईतबारदेखी चैत्र १४ गते शनिबारसम्मको….
सिह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) साता राम्र्रो रहेकोले आमा,आफन्त तथा सहयोगीबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । घर जग्गा तथा सवारि साधन जोड्न सकिनेछ । समाजमा जनताको काम गर्दा पद प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रो आम्दानि हुनेछ । बौद्धिक क्षेत्र जस्तौ स्कुल कलेज बैक तथा बित्तय क्षेत्रमा गरिने फस्टाएर जानेछ भने दैनिकी सहज रुपमा बित्नेछ । बौद्धिक साहित्य तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रबाट नाम तथा दाम दुवै कमाउँने समय रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक हुँने तथा मन परेका मानिसबाट उपाहार प्राप्त हुँने योग रहेकोछ । आफन्त तथा छोराछोरी सँगको सम्बन्ध अझ राम्रो हुँनेछ । मुद्दा मामिला तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुँनेछन् । शरिर स्वास्थ्य रहने हुँनाले राम्रा काम गरि दाम कमाउँन सकिनेछ । मामा तथा मावलीबाट सकारात्मक सहयोग पाईनेछ ।